Baydhabo oo lagu qabtay shir looga hadlay Amniga Koonfur Galbeed – Radio Daljir
Baydhabo oo lagu qabtay shir looga hadlay Amniga Koonfur Galbeed
Abriil 19, 2018 10:36 b 0
Shirkan oo arrimaha amniga Koonfur Galbeed looga hadlayay ayaa muddo laba cisho ka socday Magaalada Baydhabo, iyadoona uu shir guddoominayay Kusimaha Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ahna Wasiirka Amniga, Xasan Xuseen Maxamed (Xasan Eelaay).
Shirka ayaa waxaa ka soo qaybgalay Saraakiil ka socday Booliska Dowladda Federaalka Somaliya, UNSOM, AMISOM, Booliska Qaramada Midoobey iyo hay’ado kale oo arrimaha amniga daneeya.
Wariye-yaasha ayaa soo sheegaya in shirkan si dhow looga hadlay amniga magaalooyinka Koonfur Galbeed, sidii lagu xoojin lahaa iyo sidii lagu furi lahaa deegaanada ay go’doomiyeen maleeshiyada Al Shabaab.
Suxufiyiinta waxay sidoo kale soo sheegayaan in shirka lagu lafa guray muhiimadda ay leedahay in la furo wadooyinka ay Shabaabku jareen, isla-markaana ay muhiim u tahay maamulka iyo bulshada Koonfur Galbeed, intaba.
Shirkan oo Talaadadii ka furmay Xarunta Madaxtooyada Koonfur Galbeed ayaa waxaa Arbacadii maanta soo xiray Xasan Xuseen Maxamed, Kusimaha Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ahna Wasiirka Amniga.
Kenya oo so bandhigtay Liiska Rag alsabaab ku biiray